Warshadda Shiinaha iyo Warshadaha Soosaarka Shiinaha Chuancheng
Arooska Mason Jar Oo Soo Bandhigay Apothecary Jars Honey Pot B ...
Glass Transund Rolass wuxuu kuxirey Jar Jar oo ay la socoto Tin Lid
Weelka kulul ee kushiinka lagu iibiyo wuxuu kusameeyaa dhalada keydka cuntada ...
Caano Gaar ah Classic Caano Beer Mug Glasses
Quraarado Maraqa saliidda karinta Dhalada dhalada leh oo ku shub milix iyo ...
Saliida saytuunka iyo Boostada Dhalada
Crystal Candy Jar oo Liidata, Caddaynta Kaydinta Cabbitaanka Glass ...
Kufiican wax karintaada & waxyaabaha dubista sida baastada, qalin, digirta qalalan, bariis, shaciir, buskudka, cunnada fudud, qaxwada, shaaha, lowska ama keydinta geedaha aad jeceshahay, miraha & khudradda iyo xawaashka. Qalabka lagu karinayo ee jikada galaaska u wanaagsan ayaa sidoo kale u fiican siinta sidoo kale.
Cuntada la kaydiyey waxay sii ahaan doontaa mid cusub muddo aad u dheer daboolka hawada iyo qufulka silikonka gaaska. Quraaradda cad waxay kuu oggolaaneysaa inaad aragto waxa gudaha ku jira iyo sida cuntada keydsan ay u socoto.
Dhalada oo dhan waxay ka samaysan tahay qalab heer-cunto ah, cimri dheeri ah oo dib loo isticmaali karo, nadiif ah oo aan sun ahayn, kuma sumayn karo kiimikada waxyeelada leh cuntooyinka mana nuugo doono dhadhanka ka dib isticmaalka badan.
Ku fiican Canning - Waxay kufiican tahay xafidaada iyo xamaasada xiisaha; Dheecaankan loo yaqaan 'canning' waxaa loogu talagalay oo lagu cabbiraa sida loo yaqaan 'canning home pickled home', peach, basbaaska, jalaatada, jellies, dhawrista, suugada yaanyo, salsa, broth iyo waxyaabo kale oo fara badan.
Ku keydinta Bakhaarka - U-habboon-u-adeegsiga iyo dib-u-adeegsiga cuntooyinka qalalan iyo cunnooyinka fudud sida sonkorta, bariiska, miraha, bur, baastada, buskudka, buskudka, iyo nacnaca. Daboolka hawada ee birta ah ayaa leh xariiq bilaash ah oo ah plastisol bilaash ah oo loogu talagalay shaabad adag oo cuntada ka dhigaysa mid cusub oo sii dheereysa noloshiisa shelf. Dhalada ayaa waliba ah agab abaabul oo weyn oo loogu talagalay shay kasta oo dabacsan oo aad rabto inaad ku kaydiso qaab mirqaato ah.
Afka Joogtada ah - Afka dhererkiisu yahay 2 ¾ inji wuxuu sahlayaa in lagu dhejiyo miraha iyo khudradda sida xididdada iyo yaanyada. Furitaanka ballaaran wuxuu u oggolaanayaa gelitaanka si fudud marinka hoose ee jaangooyaha si fudud oo nadiif ah iyadoo gacanta lagu qabanayo isbuunyo.
Tayada Glass - oo laga sameeyay muraayad liinta soodheer leh oo tayo sare leh oo ka hortageysa dilaaca iyo jaba Quraaraddayadu waa mashiinka mashiinka mashiinka lagu dhaqayo oo aan lahayn daboolka. dhalo quraaradani waa 100% cunto badbaado leh oo aan lahayn nafaqo-xumo kaydinta cuntada caafimaadka leh iyo cabbitaanka cabbitaanka.
Muraayad Nadiif ah - Dhalo kasta oo galaas ah oo galaaska ah waxaa laga sameeyay muraayad saafi ah, dhalo madhan si loo hubiyo aragtida ugu sareysa ee suurtagalka ah oo kuu oggolaaneysa inaad si fudud u aragto waxyaabaha ku jira jelly iyo go'aaminta haddii ay kharribeen. Dhalooyinkan jilicsan ayaa sidoo kale ah shiraac kaamil ah oo qurxinta leh qurxinta fanka iyo farshaxanka, arooska iyo xiisaha xafladaha, iyo mashaariicda kale ee DIY.
Hore: Dhalada Malabka
Xiga: Nacnac nacnac
Dhalada Dhalada ah ee Muraayadaha
Garsoorayaasha Muraayadda Glass
Muraayadaha Weelka Muraayadaha
Gawaarida Kaydinta Pickle
Milix milix ah iyo milix milix ah milix dhalada ah
Buugga Qalabka jikada ee Girder Gir Glass Body S ...
Kaydinta Cunnada ee Wareegga Cunnada Malabka ee Wareegga Afka ee ballaaran ...
Boorashka Basbaaska ama Salt Shaker
Crystal Candy Jar oo Liidata ah, Caddaysan Quraaradda Cuntada Glass St ...